Akụkọ - Okwu mmalite nke eriri carbon
Carbon eriri akwa makwaara dị ka carbon eriri ákwà, carbon eriri ákwà, carbon eriri kpara akwa, carbon eriri prepreg ákwà, carbon eriri mesikwuru ákwà, carbon eriri ákwà, carbon eriri teepu, carbon eriri mpempe akwụkwọ (prepreg akwa), wdg Carbon eriri mesikwuru ákwà bụ a ụdị unidirectional carbon eriri mesikwuru ngwaahịa, na-emekarị nke 12K carbon eriri.
Odikwa na okpukpu abuo: Dịgasị iche iche: 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 500mm na ndị ọzọ pụrụ iche widths chọrọ site oru ngo. , na ụfọdụ ụlọ ọrụ abanyela na ụlọ ọrụ CFRP ma mepụta.
Carbon eriri ákwà eji maka owuwu nke tensile, shiee na seismic ike, azọnye mama ji jikotara aka wee na-etolite a zuru set nke ihe a na-aghọ carbon eriri mejupụtara ihe, nwere ike na-etolite a zuru okè arụmọrụ nke carbon eriri ákwà ihe iji welie usoro, adabara nhazi ụlọ eji ibu abawanye, engineering were ọrụ mgbanwe, ihe onwunwe ịka nká, ihe ike ọkwa bụ ala karịa imewe uru, Ọdịdị mgbawa ọgwụgwọ, oké gburugburu ebe obibi ọrụ akụrụngwa idozi na nchedo nke mkwado engineering.
Ike dị elu, obere njupụta, ọkpụrụkpụ dị mkpụmkpụ, adịghị eme ka mkwado nke ibu nwụrụ anwụ na akụkụ nke akụkụ. Ọ na-adabara na mkwado na ndozi nke ụdị usoro na ụdị nke ụlọ dị iche iche, Bridges na tunnels, mmụba aseismatic na mgbatị usoro. Nkwonkwo na-arụ ọrụ dị mfe, enweghị mkpa maka nnukwu igwe na akụrụngwa, enweghị ọrụ mmiri, ọ dịghị mkpa ọkụ, ọ dịghị mkpa maka ụlọ ọrụ saịtị, obere oghere nke ihe owuwu steeti, arụmọrụ dị elu. Ogologo oge, n'ihi na ọ naghị ajari, dị nnọọ mma maka nnukwu acid, alkali, nnu na gburugburu ebe obibi ikuku.
High arụmọrụ carbon eriri akwa
Okwesiri iji kwado ma mezie udiri ihe nile di iche iche, dika onu ogugu, efere, kọlụm, ihe mkpuchi ụlọ, oghere, akwa, gbọmgbọm, shei na ihe ndị ọzọ. Odabara maka mkwado na seismic mkwado nke ihe owuwu, ihe owuwu osisi na osisi Ọdịdị dị na injinia n'ọdụ ụgbọ mmiri, nchekwa mmiri na injinia ike mmiri, ọkachasị maka mgbatị dị mgbagwoju anya nke elu na nkwonkwo. Ike nke isi ihe ga-abụ ihe na-erughị C15. Ọnọdụ okpomọkụ nke ihe owuwu ga-adị n'etiti 5 ~ 35 ℃, na ikwu iru mmiri agaghị karịa 70%.
Acryli ntekwasa faiba glaasi Fabric, Acryli faiba glaasi Cloth, Acryli ntekwasa faiba glaasi, Aluminized faiba glaasi Cloth, Uwe faiba glaasi, Pu ntekwasa faiba glaasi Fabric Cloth,